पूर्वयुवराज पारस : थाइ प्रेमिका देखि साेनिका राेकायसम्म ! – Tandav News
साेनिका राेकायसँगै पाेखरामा सरर. . .
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ आश्विन २९ गते बुधबार १६:४२ मा प्रकाशित
पाेखरा । पछिल्लो केही दिन यता चौतर्फी चर्चासँगै आलोचनाको पात्रा बनेका छन्–पूर्व युवराज पारस शाह ।
उनी राम्रो काम गरेर चर्चामा आएका भने होइनन् । कहिले प्रहरीलाई कुटपिट गरेर चर्चामा आए त कहिले लागुऔषध काण्ड मुछिए । यसपटक भने उनि युट्युवर सोनिका रोकायसँगको सम्बन्धका कारण आलोचित बनेका छन् । अहिले भने उनी यूट्यूबर साेनिका राेकायासँग पाेखरामा माेटरसाइकलमा हुइँकिएकाे भीडियाे, तस्बिरले पनि भाइरल र अालाेचित छन् ।
शुरुमा सोनिकाले फेसबुकमा पारससँगको तस्वीर पोष्ट गरेकी थिइन् । त्यसपछि पारसको मोटरसाइकल पछाडि बसेको तस्वीर र भिडियो भाइरल बन्यो ।
युट्युवमा अनेक फण्डा मच्चाएर चर्चामा आउने सोनिकालाई त थप चर्चामा पुर्‍यायो नै यता पारसलाई भने झनै बद्नाम बनाएको छ ।
काण्डै काण्डले भरिएको विगत
युवराज हुँदा समेत जनताको मनमा बस्न नसकेका पारस अहिले झनै उद्दण्ड देखिए । विभिन्न स्थानमा मच्चाएको दादागिरीका कारण उनको छवि नै खतरनाक गुण्डा नाइकेको जस्तो बनेको थियो ।
२०५७ साल साउन २२ गते, काठमाडौंको दरवारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिबाट मादक पर्दाथ सेवन गरी गाडी हुइक्याउँदा उनको गाडीले किचेर मोटरसाइकल चालक गायक प्रवीण गुरुङको मृत्यु भयो ।
त्यही घटना ढाकछोप गर्न तत्कालीन राजदरवारबाट नक्कली ड्राइभर खडा गरेर उनी जोगिएका थिए ।
२०५८ जेठ १९ गते दरवार हत्याकाण्डका उनी प्रत्यक्षदर्शी थिए । उनलाई गोली काण्डबाट कुनै पनि केही क्षति भएन । अहिले आम जनताहरु राजदरवार हत्या काण्डको विषयमा उनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छन् ।
२०६७ फागुन २८ गते उनले अर्को वितण्डा मच्चाए । अत्याधिक मादक पर्दाथ सेवन गरी उनले कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाकी छोरी ज्वाइँ बंगलादेशी नागरिक रुवेल चौधरीलाई चितवनमा गोली प्रहार गरे ।
पारसको वितण्डा यतिमा मात्र सीमित छैन, २०६८ जेठ १९ गते बहिनीसँगको सम्बन्धलाई लिएर ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई कुटपिट गरी निर्मल निबासमै थुनामा राखे ।
२०७५ जेठ २८ गते दिउँसो उनले बा १४ च २१३१ उनको गाडी अनियन्त्रित तरिकाले चलाई ट्राफिक प्रहरीले रोक्न खोज्दा समेत वेबास्ता गर्दै सवारी चलाए ।
ट्राफिक नियम मिचेर सवारी चलाएका शाहलाई जावलाखेल चोकदेखि नियनत्रण गर्न नसकेर प्रहरीले थापाथलीमा रोकेको थियो ।
गत भदौ पहिलो साता पारसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डिउटीमा रहेका एक प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरे । त्यसपछि उनी झनै विवादित बनेका थिए । त्यतिमात्र नभएर उनी केही समय जाली नोट कारोबारी युनुस अन्सारीसँग समेत निकट रहेका थिए ।
अनेकौं आपराधिक र अराजक क्रियाकलापसँग जोडिएका पारस शाहले युवराज हुनुअघिदेखि नै जनअपेक्षा भन्दा फरक प्रकारको हर्कत देखाएर विवादित बन्दै आएका छन्
लागुऔषधको दुव्र्यशनी तथा मादक पदार्थका अम्मली पारसरलाई पहिलो पटक ६ सेप्टेम्बर २००७ मा हृदयघात भएको थियो । त्यसैगरी उनलाई दोस्रो पटक थाइल्याण्डमा सन् २०१३ मा हृदयघात भयो ।
त्यसपटक उनी १२ दिनसम्म कोमामा बस्नुपरेको थियो । त्यस्तै, गएको २८ जनवरी २०१९ मा समेत उनलाई तेस्रो पटक हृदयघात भएको थियो ।
पूर्वयुवराज पारस बिगतदेखि नै बद्नाम पात्र हुन् । उनी विदेशमा रहँदा समेत उनले लागुपदार्थ सेवन, लागूऔषध कारोबार र प्रेममा परेर बिबादमा आइरहे ।
२०६७ साल भदौ ११ गते नेपाल छाडेर सिंगापुर गएका पारस त्यसको केही समयपछि त्यतैबाट थाइल्यान्ड पुगेका थिए ।
सिंगापुरमा रहँदा महँगो विलासी गाडी चढ्ने पारसले बैंककमा पुगेपछि पनि महँगो बीएमडब्ल्यू कार किनेका थिए ।
दुर्व्यसनीको कुलतमा फसेका पारस जुलाई २०१४ मा थाइल्याण्डमा लागुऔषध सहित पक्राउ परेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको थाइ राजपरिवारसँगको राम्रो सम्बनधका कारण उनले आजीवन काराबास बस्नबाट छुट पाए । उनी पटक–पटक गरी ४ पटक पक्राउ र जेल परिसकेका छन् ।
थाइल्याण्डमा उनी थाई युवती कन्निका चाइसानसँग प्रेममा समेत परेका थिए । पछि उनको कन्निकासँगको सम्बन्धमा दरार आयो र प्रेम छुट्यो । अझै पनि कन्निकाले कहिलेकाहीँ पारससँगको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने गरेकी छिन् ।े